Baidoa Media Center » Maxaad Shirib ka taqaan? Q:3AAD
Maxaad Shirib ka taqaan? Q:3AAD
July 16, 2012 - Written by admin - Edited byadmin Labaddii qaybood ee hore, waxaynu ka soo hadalnay, xeerarka iyo Miisaanka Shiribka iyo hal ku dhigyadiisa lagama maarmaanka ah, inagoo halkii ka sii ambaqaadi donna, ayaa waxaan sii qeexaynaa Shiribka iyo suugaanta kale arrimo ay wadaagaan iyo kuwa ay ku kala duwan yihiin.
Shiribku maaha hees, balse xilliyadan danbe sida heesaha casriga, hees ciyaareedkii oo dhan looga dhigay hees lagu luuqeeyo, ayaa Shiribkiina laga dhigay hees lagu luqeeyo, oo la dhegaysto, durbaan iyo dararamna leh, wax dhibana uma keenayso qiimaha iyo milgaha Shiribka, wana loo qaadi karaa qaab heeseed, balse, asal ahaan hees maaha, oo bahda heesaha laguma tiriyo,
wuxuu la wadaagaa dhinacyada Jiibta jaanta iyo luuqda gaarka ah, booddada iyo gooynta. Jiibta shiribka haddaan tusaale usoo qaadano sidan ayay , “Heleey wayaa hibooy hellee, waayaabe heliboow hellee,ama Heeleey heeleey heeley waayaa, waayaaba heeleey heeleey waa”
Shirib ka hadlaya arrimaha bulshada bal aan tusaale u soo qaadannee, Laashin “Nuur Caggeey”(AUN) wuxuu yidhi:
Afar walxaato Alif ku taal, Minaad aragto waa Inkaar:
Adoon Ariyo Geel lahayn, Abaar ku arrad waa inkaar!
Igaarkii kuu aroorayoon, kuu soo aruurin waa inkaar!
Abooto Aabbahaa dhashood, ka oohisiisay waa inkaar!
Nimaad Islaam ku aamintoo, kaa eexahaayo waa inkaar!
Wuxuu Laashinku tilmaamay inay jiraan afar arrimood oo inkaar iyo dhibaato sababi kara oo kala ah:
Inta badan abaartu waxay saamaysaa xoola dhaqatada iyo beeralleyda, marka hadduu jiro qof aan xoolo lahayn,beerna lahayn, hadduu yiraahdo waxaan u arraday abaarta iyo wax la’aanta awgeed, maaha wax suurta gal ah, waxaa lagama maarmaan ah inuusan is dhigan abaarta awaadeed ee xoogsado ileen Abaar iyo Aarran waa isugu mid xagiisa, waayo haddii abaari timid iyo haddaysan imanba saamayn kuma laha dhinaca dhaqaalahiisa,dadkuna haynta meel kasta oo la joogo lagama sina, markaa wuxuu Laashinku isagoo baraarujinaya leeyahay; waa inaad xoogsataa, oo aad gacantaada wax kula soo baxdaa, oo aadan u arradin, illeen awalba xoolo maad lahayne, maxaa Abaari kaa taraysaa?.
Meeriskani wuxuu ka hadlayaa wiilkaagii ama ilmahaad dhashay oo ceelka kaaga doonay biyo ama xoolihii arooriyey, haddii uusan dib u soo laaban inay tahay inkaar iyo arrin naxdin leh , wuxuu tilmaamayaa werwerka waalidka inaysan hurdo ledin haddii ubadkoodu war iyo wacaal la’aan kaga maqan sidoo kalena wuxuu tilmaamaya amni darrada iyo nabadgelyo xumo inaysan wanaagsanayn.
Meeriskani wuxuu muujinaysaa inaadan aflagaado u gaysan waalidkaaga oo dhan halkanse wuxuu ku soo halqabsaday Laashinku Aabbahaa Hooyadiis Abooto (Ayeeyo) oo uu sheegay,inay tahay waalid mudan in la karaameeo oo la ciseeyo, in laga inkaarsado ama lagu caasiyaana tahay wax xun oo aan dhaqan iyo diin midna ku wacnayn.
Nimaad Islaam ku aamintoo, kaa eexahaayo waa inkaar
Meeriskanina wuxuu tilmaamayaa in is aaminku yahay wax wanaagsan, balse, eexda iyo sinnaan la’aantu tahay wax xun, waayo shaqsi aad aamintay, oo gar u dhiibatay adigoo Islaannimadiisa ku qiimaynaya, oo kaaga eexday si aan cadaalad ahayn waa inkaar iyo habaar weeyaan.
Haddaba Shiribka ayaa leh fan iyo farshaxanimo u gaara, mana aha suugaanta sida Geeraarka, Jiiftada iyo heesta in nin weliba hawaysan karo, ee waxuu u baahan yahay shaqsi aqoon u leh, habdhiciisa, miisaankiisa iyo hannaanka laysugu dubbarido.
Shiribku waa gole ka fuul Isla goobta la jooga lagu sameeyee ee looma soo fekero! wuxuu leeyahay mararka qaarkood Halxiraale la isku weydiiyo su’aalo dhaqan ama ujeedooyin kale.
Shiribku waxuu leeyahay inta qaab iyo qorshe ee ay suugaaani leedahay, waxaana loo adeegsan karaa Xummaan iyo samaan Wacyigelin, Baraarujin, Jareexo,kaftan, Dhaleecayn, Ammaan, Hanjabaad iwm.
Sida dhaqanku yahayna waxaa jirta qaabab badan oo dadku wax isu tari jiray, sida Kaalada, oo ninku markuu guursado xoolo loo uruurin jiray, Qaaraanka oo qofka haddii xooluhu ka baxaan uu dadkiisa xoolo u soo guri jireen, Magta ama Diyada oo iyana laysla bixin jiray, iyo deeq gaar ah oo ninka la gacloon jiray xigaalkiisa ama xididka ninka uu ka xoola iyo xandho badan yahay inuu u bar gooyo xoolihiisa.
Haddaan tusaale u soo qaadanno, waxaa hadda ka hor dhacday in Laashin “Cabdulle Aw Muuse” (AUN) Oo aad caan uga ahaa deegaannada Shabeellaha dhexe ayaa waxaa u soo xoolo doontay dad ay ehelo ahaayeen, oo aysan isla waqtigaas isku deegaan ahayn, nimankii marka ay u yimaadeen ayuu shirib su’aalo ah weydiiyey isagoo qaabka ay wax uga doonayaan raba inuu ogaado, si suugaanaysan oo asluubaysan ku yiri sidan:
Saddex Walxaatoo Deelku taal, middaad ku soo dannaysateen?
1.Ma Daaw daba caddaadayaa, ku soo diroo ducaad waddaa?
2. Mise Dog cosoboo tahoo, wax daaqa kuuma dabranayn?
3.Mise Nin dablehaad tahoo, minaan ku diido way dirqee?
Haddaan falanqayn kooban ka bixiyo, qaabka Laashinku u dhigay Shiribka wuxuu weydiiyey saddex su’aalood midkay ahayd dantoodu:
Ma Daaw daba caddaadayaa, ku soo dirroo ducaad waddaa?
Daaw waxaa loo yaqaan Dooga ama baadka xiliyada abaarta ba’ani dhacdo baadka oo dhami, Caws iyo Cayo &Caleentuba waa qalalaan waana caddaadaan , laashinku isagoo weydiinaya Ma abaar iyo meel baad iyo biyoba lahayn oo geedkeedii caddaaday ayaad ka timaaddeen oo xoolo iyo kaalmo raadis ayaad ahaydeen?
Mise Dog cosobbaad tahoo, wax daaqa kuuma dabranayn?
Mise waxaad tihiin niman bar xoolaad lagu ogayn, oo xariggooda xoola ku jirin,
Marka barrinka reerku deggan yahay ay xoolo joogaan, Digo, Farsho, Saa lo, iyo raad xoolaad oo badan iyo geedaha oo ka dhammaada ayaa lagu yaqaan, haddiise aysan meeshaas xoolaha joogin carro nadiifa oo caws iyo cayo ka buuxaan, saalo iyo raad xoolaad midna lahaynm waa halka Laashinku ka leeyahay ( Dog cosob) gurigaagu waa guri aan xoolo ka dareerin ayuu uga danleyahay.
Mise nin dablehaa tahoo, minaan ku diido way dilee?
Mise nin dab iyo hub wata ayaadba tahay, oo xitaa haddaan waxaad u socoto diido ama kuu deyriyo nin dib u noqonaya ma tihide waabad i dilaysaa, saddexdan weydiimood oo mid weliba na barayso ujeeddo gaar ah oo laysugu yimaad ayuu na tusinayaa shiribkani.
Haddaan Tusaale u soo qaadanno wada hadalka ama hanjabaadda iyo Garnaqsiga, waxaa dhacday in laba nin ay dhex martay dood ku saabsan Dhul ay isku haysteen, oo midkood lahaa kan kalena doonayey inuu dhaco ama ka duudsiyo isagoo weliba go’aankiisa adkaynaya ninkana xoolihiisa ku bannaysanaya ayaa wuxuu yiri:
Intaad dhinac saarataad, Dhulka ku leedahee i dhaaf`!
Ninkii kale oo ka garaabayaa inay xaq tahay in qof weliba leeyahay inta godkiisa laga qodayo, haddana diiddan in xoolihiisa la dhaafiyo oo garnaqsanaya ayuu ugu jawaabay:
Dhawaaqaas halna way dhibaa, Halka kalena way dhacaa
Intaad dhinaca saarataad, Dhulka ku leedahaay way dhacee
Ii dhaaf dhaxalkii Aabbahaa, ha ku dhimanniney dhibee!
Si farshaxanimo iyo aftahanimo ku jirto oo falsan ayuu ugu hal celiyey jaalkiisii boobka u taagnaa, wuxuuna ku yidhi, waan ogahay inaan intaan dhinaca dhigayo ku leeyahay dhulka, waana iga dhaadhacsan tahay, waase haddaan dhinto, balse intaan noolahay dhaxalkii Aabbahay in nin iga dhaco oo I yiraahdo ii dhaaf ama iiga leexo yeeli mayo, taasi way i dhibaysaa .
Sidoo kale, dhinaca Kaftanka iyo jaajaalaynta ama jareexada waxaa jira iyana shirib badan oo ka hadlaya, haddaan mid ka mida tusaale u soo qaadanno oo laba nin is weydaarsadeen waxay yiraahdeen:
Juuc qaajo waa jirroo kalee, jeebkaaga mayga jeenanee?!
An weyga Jeenya weyn tehee, Jeebkayga xaa ka soo jeree?!
Nin jirran aan jeenayn hayn, waxaw jerin jiraan jeraa!
Is jilci jidkaasna qaad, Jamaaco saas ahaa jirtee!
Labada Laashin ayaa is weydaarsaday sheeko qurux badan, oo sidan u dhacday
Juuc qaajo waa jirroo kalee, jeebkaaga mayga jeenanee?
Wuxuu yiri: gaajadu waa cudur halisa, ee jeebkaaga wax iga tar oo iga af qabo, ama iga jeenane wax dheef iga sii.
Wuxuu ugu jawaabay:
An weyga Jeenya weyn tehee, Jeebkayga xaa ka soo jeree?
Waabad iga xoog weyn tahay, oo iga gacmo waaweyntahay, ee maxaa jeebkayga iyo waxaan haysto ku tusay.
Kama harine wuxuu yiri :
Nin jirran aan jeenayn hayn, waxaw jerin jiraan jeraa
Nin kaalmo u baahan oo xanuunsanayaa wuxuu dooni jiray baan doonayaa, sidaas awgeed baan wax kuu weydiistay
Is jilci jidkaasna qaad, Jamaaco saas ahaa jirte
Wuxuu yidhi isagoo u deyrinaya welibana jikaaraya, way jiraan qolyo farsamadaa wax ku raadiya oo tuugsada ee intaad is jilciso isna debciso miskiinimo muujiso jidkaa raac cid wax ku siisa waayi mayside!
Shiribyada aan soo sheegnay oo nooc walba lahaa, wuxuu ku tusinayaa inta Suugaan loo adeegsado, ee qaybaha nolosha ku saabsan inuu shiribkuna leeyahay, oo uu yahay Suugaan dhumuc iyo qareba leh una baahan in la barto lana adeegsado.
Abwaanka ama Laashinka Shirib yahanka ah wuxuu markiiba dareemi karaa halka deelqaafka iyo laaxinku kaga jiro markuu maqlo ama aqriyo, waxuu kale oo leeyahay arrimo u gaara, oo waxaa laysu saar saaraa saddex saddex ama shan shan ama toddoba iyo ka badan, oo isku xiran iskuna ujeeddo ah, nin weliba awooddiisu intay la eg tahay, jaallaha kale ee jawaabta laga sugayaana waa inuu jidkii, isla eraygii iyo isla ujeeddadii maraa, sida ciyaaraha, hiddaha iyo dhaqanka ay ku caan yihiin.
Waxaa kale oo shiribka ay ku lifaaqaa ragga farshaxanka ah ee aadka u yaqaan Guuroowga ama gabayga oo marka abwaanku gooynayo uu shirib ku gooyo ka dibna shiribka iyo booddada, jiibta iyo jaanta lays raaciyo, oo Abwaanka gole ka fuulka ah ee bulshada dhexdeeda gabayga la taagan ku xiiqtirto, mararka qaarkood waxaa dhacda in Abwaanku markuu dhammeeyo Gabayga, Abwaan kalena saaro shirib la halmaala Gabayga ama Guuroowgaas ku laro oo ku bilciyo.
Tusaale ahaan: Guuroow & Shirib “Riyo” Abwaan Cabdulle Geeda Naar, wuxuu yiri:
Xalayaan riyoodoo oo qalbigu raaxo uu helaye
Hala raaya aan yeeldhay iyo wiilal aan raacsho
Saca raaya aan yeeldhay oo Dibbigu raawaayo
Riyo badana waa yeeldhay, oo laga ruxaa caano
Reer qurxoona waa yeeldhay ,iyo Ra’ iyo haaman
Risqi badana waa helay iyo Ribix aduunyaale
Raalli naaga aan yeeldhay, oo saan raba u taalla
Wiilal ragana ay ii dhashiyo, riigtan lagu faansho
Ra’liga hadday soo galaan, laga rumaysaayo
Aniguna rijaal aan naqdhay iyo oday Bun ruugooba.
Raaxadii minaan helay, dantuna saan rabo u taallo
Aan rakooc ka soo iri hurdada, reedahana fiirshay
Minaan dayey wax ii raaya maleh, raadna kuma yaallo
Ee rabaan cawada seexdayaan, madax ku riiqaayey.
Waxaan iri: riyooy waa hubood caawa iga reeysay
Waxay tiri: adaa rabay asaan sida u rooraayey
Waxaan iri: minaan rabayna waa shaqadii ruuxaanta
Waxay tiri: wax ruuxaan la dhaho, raadka kuma saarin
Waxaan iri: maxay rorojiyoo, rigixa ii geeystay?
Waxay tiri: ma roogsane, rabtaad luga rafaadaysay.
Waxaan iri: rag kale maa aragtoy riyo ku dheelayso
Waxay tiri: raggaan badan, sidow rabo riyow sheegta
Waxaan iri: runtaa maahan oo ribixi buux waaye
Waxay tiri: hadduu ruux ordo xaa rabta u yaalla
Nin weliba asoo weliba rabaa laga ridaayaaye.
Ka dibaan rumaystay oo qalbiga saas kale u rogaye
Waxaan iri: run sheegtaa iyo been rabrabisaaba
Waxaan iri: is riixdaa iyo raalli noqotaaba
Waxaan iri: rabbaysaa iyo hoos u rogantaaba
waxaan iri: raqiistaa iyo ribix dhex joogtaaba
Waxaan iri: ruxaysaa iyo yaabis ridataaba
Waxaan iri: raq jiiftaa iyo roor ku jirisaaba
Waxaan iri: raraysaa iyo ruun ku dhaqataaba
Waxaan iri: minaad raran heshiyo rays ku socotaaba
Waxaan iri: rumootaaye ilkaha rigif ku qaadaaba
Waxaan iri: rag noqotaa iyo riif u dabataaba
Rafaadkeerya reenteer aduunyada runteed maaha
Nin weliba asoo weli rabaa laga ridaayaahe
Inta ruuxu kugu jiro waxaad aragto ruug waaye
Hoobaloow, hoo, shirib
Raguu intuu run moodayoo, reyn loo qabaan riyo iraah,
Ninba hadduu rab roogsayoow, rumoowye rag isu qabyaa!
Gebi ahaan suugaanta Soomaaliyeed ayaa leh murti iyo mug culus, muddooyinkan danbena waxaana inta badan wax laga qoraa qaybaha kale ee suugaanta, sidaa awgeed maan arkin Abwaan ama suugaanyahan wax ka qoray shiribka, waxaana ii soo baxay inay lama huraan tahay inaan qalinka u qaato, oo aan qormo kooban ka diyaariyo shiribka, haddii Eebe ogolaadona waan joogteyndoonaa faallada iyo falanqaynta jaadadka kala duwan ee suugaanta Soomaaliyeed hadba intii awood iyo aqooni ii ogolaato.
Abwaan Axmed Xaayoow
Nabbadoon Cismaan Axmed Mataan
Bashiir M. Hersi,
Kaydka Shaaciyenews ee Guuroowga iyo Shiribka .